MYU SHADAN: September 2014
စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့ အွန်လိုင်းတွင် ဖြန့်ချီခဲ့သော ၅၅ မိနစ်ကြာ ဗီဒီယိုဖိုင်တွင် အိန္ဒိယတိုက်ငယ်တွင် Al Qaeda အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ အာသံ၊ ဂူဂျာရတ်၊ အာမက်ဒါဘတ် နှင့် ကက်ရ်ှမီးယားမှ မွတ်ဆလင်များအတွက် ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ သတင်းကောင်းတခု ဖြစ်ပြီး တပ်ဖွဲ့ သစ်က မွတ်ဆလင်များကို မမျှတခြင်းနှင့် ဖိနှိပ်ခံရခြင်းတို့မှ ကယ်တင်မည်ဟု Ayman al Zawahriက ဆိုသည်။
“ဒီသတင်းကြောင့် အချင်းချင်းအကြား သံသယတွေ ကြီးထွားလာပြီး ပဋိပက္ခတွေဆီ ပြန်လည်ဦးတည်မသွားအောင် သတိရှိကြဖို့ လိုပါတယ်။ သိပ်ပြီးလည်း စိုးရိမ်တကြီး ဖြစ်နေစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။ စိုးရိမ်လွန်ကဲတာမျိုး မဖြစ်အောင်လည်း ပြောလိုပါတယ်” ဟု သမ္မတရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်ဌေးက သူ၏ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာတွင် ထုတ်ပြန်ရေးသားထားသည်။
Ayman al Zawahri က ဆီးရီးယားနှင့် အီရတ်တွင် အင်အားကြီးထွားလာနေသည့် အစ္စလမ်မစ်နိုင်ငံအဖွဲ့ (IS) က အစ္စလမ်မစ် စစ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် Al Qaeda အဖွဲ့၏ ခေါင်းဆောင်မှု အပေါ် စိန်ခေါ်လာခြင်းကိုလည်း လုံးဝ သဘော မတူကြောင်း ပြောကြားခဲ့သလို အာဖဂန်နစ္စတန်မှ တာလီဘန်ခေါင်းဆောင် Mullah Omar အပေါ် ကာလရှည်ကြာစွာ သစ္စာစောင့်သိမှုကိုလည်း ထပ်မံအတည်ပြုပြောဆိုသွားသည်။
နိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေး ကျွမ်းကျင်သူများကမူ အယ်လ်ကိုင်းဒါး၏ သက်ကြီးရွယ်အို ခေါင်းဆောင်များသည် လူသစ် စုဆောင်းရာတွင် IS အဖွဲ့နှင့် ယှဉ်ပြိုင်နေရ၍ အကြပ်အတည်းများ ရင်ဆိုင်နေရသည်ဟု ဆိုကြသည်။ IS အဖွဲ့က ကမ္ဘာ အနှံ့အပြားမှာ လူငယ်နောက်လိုက်များကို အီရတ် နှင့် ဆီးရီးယားနယ်စပ်ရှိ နယ်မြေများမှ နေ၍ သွေးဆောင် စည်းရုံးလျှက် ရှိသည်။
IS အဖွဲ့၏ ခေါင်းဆောင် Abu Abu Bakr al-Baghdadi က ၎င်းကိုယ်၎င်း ကာလိဖ် (caliph) သို့မဟုတ် အကြီးအကဲဟု ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲပြီး မွတ်ဆလင်အားလုံးက သစ္စာခံကြရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။
IS အဖွဲ့သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် Ayman al Zawahri ၏ အဖွဲ့မှ ခွဲထွက်လာပြီး ဆီးရီးယား နိုင်ငံတွင်းသို့ ၀င်ရောက်ကာ Abu Abu Bakr al-Baghdadi ၏ နောက်လိုက်များက ခေါင်းဖြတ်ခြင်း၊ ဘာသာရေးကို အကြောင်းပြု တိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့် အကြီးအကျယ်သတ်ဖြတ် သုတ်သင်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
IS အဖွဲ့ကို သွယ်ဝိုက်၍ ငြင်းပယ်ခြင်း အပါအ၀င် Ayman al Zawahri ၏ ကြေညာချက်သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ၏ ၀န်ကြီးချုပ် အသစ် နေရိန်ဒြာမိုဒီအတွက် စိန်ခေါ်မှုတခုဖြစ်လာနိုင်သည်။ နေရိန်ဒြာမိုဒီသည် မွတ်ဆလင်ဆန့်ကျင်ရေးဟု ယူဆနိုင်သည့် တိုက်ခိုက်မှု အမြောက်အမြားနှင့် ပတ်သက်၍ နှုတ်ဆိတ်နေခဲ့သဖြင့် ဝေဖန်ခြင်းခံနေရသည်။
ထိုနည်းတူ မွတ်ဆလင် လူနည်းစုများအပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံပြီး ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းမှ ရိုဟင်ဂျာများအပေါ် ဖိနှိပ်ရက်စက်မှုများ ရှိသည်ဟု ဦးသိန်းစိန်ဦးဆောင်သော မြန်မာအစိုးရအတွက်လည်း စိန်ခေါ်မှုတရပ်ဖြစ်သည်။
သမ္မတရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်ဌေးကမူ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု၏ ပစ်မှတ် ဖြစ်လာနိုင်သည်ကို လွန်ခဲ့သည့် နှစ်အနည်းကတည်းက ကြိုတင်သိရှိထားကြောင်း၊ သို့အတွက် လိုအပ်သည့် လုံခြုံရေး ကိစ္စများ ပြင်ဆင် ထား ကြောင်း၊ အယ်လ်ကိုင်ဒါး ကွန်ရက် ပြန့်နှံ့စီးဆင်း လည်ပတ်မှုများအား လေ့လာပြီး ၀င်ရောက်လာနိုင်မည့် လမ်း ကြောင်းများကို ကြိုတင်သတ်မှတ် ဆောင်ရွက်ထားရှိကြောင်းလည်း ဆိုသည်။
အာဖဂန်နစ္စတန်နှင့် ပါကစ္စတန်နယ်စပ်တွင်သာ အများအားဖြင့် အခြေပြုထားသည့် အယ်လ်ကိုင်းဒါးအဖွဲ့သည် ဒေသတွင်း စစ်သွေးကြွအဖွဲ့များနှင့် နှိုင်းစာလျှင် လူအင်အားရော နယ်မြေကျွမ်းကျင်မှုပါ အင်အားနည်းနေသည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန် လက်ရွေးစင်တပ်ဖွဲ့များ လက်ချက်ကြောင့် သေဆုံးခဲ့ရသည့် ခေါင်းဆောင် Osama bin Laden နှင့် ၎င်းကို ဆက်ခံသူ Ayman al Zawahri တို့က တာလီဘန်ခေါင်းဆောင် Mullah Omar အပေါ် သစ္စာစောင့်သိမည့် အ ကြောင်း နှင့် သူ၏နောက်လိုက်များကို အာမခံခဲ့သည့် အတိုင်း သူတို့အတွက် လုံခြုံသော နိဗ္ဗာန်ဘုံဖြစ်သည့် အာဖဂန်နစ္စတန်သို့ ပြန်နိုင်ရေး အကြိမ်ကြိမ်ကတိပေးခဲ့ကြသည်။
IS အဖွဲ့၏ နိုင်ငံတည်ထောင်ရန် အားထုတ်မှုမျိုးကို အယ်လ်ကိုင်းဒါး ခေါင်းဆောင်များက မည်သည့်အခါမျှ ကြိုးစားခဲ့ခြင်း မရှိပါ။ ၎င်းတို့က အစဉ်အလာအားဖြင့် အနောက်အုပ်စုမှ ပစ်မှတ်များကို တိုက်ခိုက်ရန်ကိုသာ အားသန်ခဲ့ကြသည်။
နယူးယောက်ရှိ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေး အဆောက်အအုံ အမွှာညီနောင်ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့က တိုက်ခိုက်မှုသည် အယ်လ်ကိုင်ဒါး၏ အကြီးမားဆုံး တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်သည်။
Ayman al Zawahri သည် အယ်လ်ကိုင်ဒါး ခေါင်းဆောင် Osama bin Laden သက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ်က ဒုတိယ ခေါင်းဆောင်အဖြစ် လူသိများသည်။ Ayman al Zawahri အား ဖမ်းဆီးရမိပါက ဒေါ်လာ ၂၅ သန်း ဆုငွေပေးမည်ဟု အမေရိကန်က ကြေညာထားသည်။
Posted by myu shadan at 8:56 PM No comments:
Posted by myu shadan at 8:50 PM No comments:
ဒီကောင်လေးကတော့မနေ့ကမှထွက်ရှိလာတဲ့ Update အသစ်လေးဖြစ်တဲ့ IDM 6.21 Build7လေးကို
တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ့ ။ Install လုပ်နည်းကတော့.....အင်စတော့မလုပ်ခင်မိမိမှာရှိနေတဲ့အဟောင်း
ကို full လေးကိုအမှန်ခြစ်လေးပေးပြီးထုတ်ပေးလိုက်ပါ ပြီးရင် ဒေါင်းလော့ဖိုင်ကိုဖွင့်ပြီးဒေါင်းလော့မန်နေဂျာ
ကိုအင်စတော့လုပ်လိုက်ပါ နောက်ဆုံး finish နှိပ်ပြီးတာနဲ့ Taskbar မှာရှိတဲ့ IDM icon ကို ပိတ်လိုက်ပါ
ပြီးရင် Crack file ထဲမှာရှိတဲ့ကောင်ကို copy လုပ်ပြီး အင်စတော့လုပ်ထားတဲ့ [C:\_Program Files\_Internet Download Manager] OR [C:\_Program Files (x86)\_Internet Download Manager]
ထဲမှာထည့်ပေးလိုက်ပါ ဘောက်ကျလာရင်အပေါ်ဆုံးက Copy & Replace ကိုနှိပ်လိုက်ပါ ။ ပြီးရင် Active
ဖြစ်ဖို့အတွက် "IDM Key.reg" ကို Double click နှိပ်ပြီး Run ပေးလိုက်ပါ ။ UpDate တောင်းရင်မပေး
လိုက်ပါနဲ့ ဒါဆိုရင် full အဖြစ်နဲ့အမြဲတမ်းအသုံးပြုနိူင်ပါပြီ ။
Posted by myu shadan at 9:42 PM No comments:
pc ပေါ်မှာစစ်ဂိမ်းလေးတွေဆော့ရတာကြိုက်တဲ့ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းတွေအကြိုက်တွေ့စေမဲ့ Delta Force: Black Hawk Down pc game လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။ ဒီကောင်လေးကတော့ မြောက်များစွာ
ပြတ်သားမူရှိပြီး သွားတိုက်ရမဲ့အခန်းပေါင်းများစွာပါဝင်ပါတယ် ။ တဆင့်ချင်းစီသွားရမယ့်နေရာတွေနဲ့
မှာပါ ဖိုင်ဆိုဒ်က 293mb ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ့ ။
Totally redesigned for the PS2 utilizing the groundbreaking Azura engine, Delta Force – Black Hawk Down recreates the intense atmosphere ofawar-torn country. From tours of duty in the vast Somali countrysid where snipers could lurk on top of any hill - to the maze like streets of Mogadishu, where militia and civilians blend seamlessly. To ensure accuracy, NovaLogic spent months researching the history of the conflict, and worked extensively with three former Special Forces Operatives, including two who served in Somalia in 1993.
This is the first time any Xbox title has demonstratedamultiplayer experience of up to 50 players on Xbox Live, with the current standard being 16 players. DF - BHD has been redeveloped for the console specifically to take advantage of Xbox Live.
Posted by myu shadan at 9:30 PM No comments:
Website တစ်ခုကို Windows7နဲ့ Hacking လုပ်နည်းလေးပါ တကယ်ကိုအသုံးဝင် ပြီးတော့ရှင်းလင်း စွာရေးပြထားပါတယ်။ လိုချင်တဲ့သူငယ်ချင်းများ အတွက်အလွယ်တကူ ယူလို့ရပါတယ်။ ယူတဲ့သူငယ်ချင်းများ အားလုံးအဆင်းပြေပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်။ စာရေးသူ ( 3thic0kiddi3 ) ဖြစ်ပါတယ်။
Credit to ==> Red Skull
Posted by myu shadan at 9:09 PM No comments: